सडक बनाउन भद्रपुरका दुई वडाको सक्रियता - Jhapa Online
सडक बनाउन भद्रपुरका दुई वडाको सक्रियता
भद्रपुर, २८ भदौ । झापाको भद्रपुरमा दुइवटा वडाले मिलेर दुइ वटा वाडको वीचमा रहेको सडक बनाउन सक्रिय पहल गर्ने भएका छन् । आज दुबै वडाका अध्यक्षहरुको संयुक्त बैठकले वडा नं. ७ र वडा नं. १० कोवीचमा परेको लेखनाथ चोक पश्चिमदेखि देउनियाँ सम्मको सडक वनाउन सक्रिय पहल गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
वडा नं. ७ का अध्यक्ष विनोद पोखरेल र वडा १० का अध्यक्ष टेकबहादुर खड्का काजीको संयुक्त अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकमा दुबै वडाका वाडसदस्यहरु र वोर्ड सदस्यको पनि सहभागिता रहेको थियो । सहभागी वडा सदस्यहरुमा १० का तुलसी पोखरेल, श्याम राउत र कमला अछामी तथा ७ नं. वडाका फुलसिंह राजवंशी, पोषराज पौडेल, विभा पासवान र वोर्ड सदस्य भक्त खबास रहेका थिए ।
करीब ४ किलोमिटरको उक्त सडकलाई बनाउन बारम्बार नगरपालिकामा आग्रह गरेको भएपनि योजनामा नपरेपछि नगरपालिकासँग इस्टिमेट गर्न आग्रह गरी प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारको बजेटबाट उक्त सडक वनाउने कुरामा लाग्न अघि बढ्ने निर्णय गरिएको ७ नं. वडा अध्यक्ष पोखरेलले वताए । यदि त्यति गर्दा पनि उक्त सडकको स्तरोन्नति नभएमा सशक्त संघर्षमा उत्रने निर्णय गरिएको वडा सचिव मुरारी पोखरेलले जनाए ।